शरिरका कुन–कुन अंगका लागि के–के खाने ? - Gokarna News from Nepal
शरिरका कुन–कुन अंगका लागि के–के खाने ?
बिहिबार, चैत २१, २०७५ by Gokarna News
एजेन्सी– प्राकृतिक खानाको प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । प्याकेजिङ, रिफाइन गरिएका र रेस्टुरेन्टका खानेकुराले स्वास्थ्यलाई हानि पुयाउँछ । मानव शरीरका फरक–फरक अंगका लागि फरक–फरक पोषणको आवश्यकता हुन्छ ।
कपालका लागि प्रोटिनको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले शरीरमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन भएमा मात्र कपाल स्वस्थ रहन्छ । माछा, मासु, गेडागुडी, दूध, अन्डाजस्ता खाद्यपदार्थमा प्रोटिनको मात्रा हुन्छ ।
मानिसको ६० प्रतिशत मस्तिष्क बोसोले बनेको हुन्छ । त्यसैले मस्तिष्कका लागि ‘गुड फ्याटी एसिड’को अवश्यकता हुन्छ । जसमा पर्छ ‘ओमेगा थ्री फ्याटी एसिड’ । त्यसैले मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न माछा, ओखर, भाङ्गोलगायतका खाद्यपदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ ।
आँखाका लागि भिटामिन ए सबैभन्दा उत्तम पौष्टिक तत्व हो । हेर्दा पहेँलो देखिने खाद्यपदार्थमा भिटामिन ए हुन्छ । जस्तो कि गाँजर, मेवा, आँप, सखरखण्ड, अन्डाको पहेँलो भाग, कलेजो आदि ।
दाँतको स्वास्थ्यका लागि हामीले कहिल्यै पनि प्याकेजिङ गरिएका पेय पदार्थ प्रयोग गर्नुहुँदैन । बरु फ्रेस जुसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । केरा, स्याउलगायतका फलफूलले पनि दाँतलाई स्वस्थ राख्ने काम गर्छ ।
फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न एन्टिअक्सिडेन्टको बढी मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ । ब्रोकाउली, पालुंगोको साग, कालो अंगुर, किम्बुजस्ता खाद्यपदार्थबाट एन्टिअक्सिडेन्ट प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, फोक्सोका लागि प्रोटिनको पनि त्यतिकै आवश्यकता हुन्छ ।
मुटुलाई दुई तरिकाले असर पारिरहेको हुन्छ । एउटा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी भएर र अर्को ब्लडप्रेसरका कारण । ब्लडप्रेसर नियन्त्रणका लागि पोटासियम सेवन गर्नुपर्छ । केरा, सागपात, पालुंगो, टमाटर, एभोकाडो, नरिवलको पानी आदिमा पोटासियमको मात्रा निकै हुन्छ । त्यस्तै, कोलेस्ट्रोल सन्तुलित राख्न ओमेगा थ्री फ्याटी एसिड र एन्टिअक्सिडेन्टको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
मिर्गौलाका लागि पर्याप्त मात्रामा पानी सेवन गर्नुपर्छ । अव्यवस्थित तरिकाले जीवनयापन गर्ने मानिसको पनि मिर्गौला फेल हुन सक्छ । किनकि, उनीहरूले निकै धेरै प्रोटिनको सेवन गरिरहेका हुन्छ । आवश्यकभन्दा बढी प्रोटिनले पनि मिर्गौलामा असर पार्ने गर्छ । त्यस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचापका कारण पनि मिर्गौलामा असर पर्न जान्छ । त्यसैले यस विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । स्वस्थ मिर्गौलाका लागि राम्रोसँग पच्न सक्ने खानाको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
हाडलाई चाहिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व भनेको क्याल्सियम हो । जुन दूध र दूधजन्य पदार्थबाट अत्यधिक पाइन्छ । यसबाहेक ब्रोकाउली, आल्मन्डलगायतबाट पनि क्याल्सियम पाइन्छ । हाडका लागि चाहिने अर्को तत्व भनेको फसफोरस हो । जुन दूध, दही, माछा, मासु, गेडागुडीलगायतबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
छालालाई स्वस्थ राख्न इसेन्सियल फ्याटी एसिडको आवश्यकता हुन्छ । जुन तोरी, भटमासको तेल, ओखर, आल्मन्डमा भरपुर हुन्छ । यस्तो पौष्टिक तत्वले छालामा चमक ल्याउने काम गर्छ । त्यस्तै, चाँडै चाउरी पर्ने र दाग देखिने समस्याका लागि एन्टिअक्सिडेन्टको आवश्यकता हुन्छ । जुन कालो अंगुर, गाँजर, कागती, दालचिनी, तुलसी, ग्रिन टी आदिबाट प्राप्त हुन्छ ।
(एजेन्सीको सहयोगमा )
आज विश्व हात धुने दिवसः तपाईंलाई हात धुन आउँछ ?
कुन महिनामा जन्मेका महिला सुन्दर अनि मालामाल… ?
कतै यसकारण त टुट्दैछैन तपाईंको सम्बन्ध ?
के तपाईंलाई बाथ रोगले सताएको छ ? यस्ता छन् बच्ने उपाय